जोखिम मोल्दै बाल अभियान्ता - Pradesh Today जोखिम मोल्दै बाल अभियान्ता - Pradesh Today
पुष १४, २०७६ उमा भण्डारी
तुलसीपुर, १४ पुस । शिवशक्ति मावि कक्षा १० मा पढ्दै गरेका खिमबहादुर बस्नेत बालविवाहविरूद्ध काम गर्दै आएका छन् । समाजमा हुने बालविवाहको विरूद्ध काम गर्दै गर्दा आफू सुरक्षाको जोखिममा पर्दै आएको उनको अनुभव छ । आफ्नै उमेर समूहका साथीहरूको विवाह रोक्दै गर्दा उनीहरूका घरपरिवारले मानसिक, शारीरिक यातना दिनुको साथै विभिन्न किसिमका डर, त्रास, दिने गरेको बताए ।
विगत तीन वर्षदेखि बालविवाहका विरूद्धमा काम गर्दै आएका बस्नेतले कतिपय स्थानहरूमा विवाह रोकेकै कारण आफूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आक्रमणसमेत गरेको सुनाए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक निकायहरूको समन्वय पातलो भएकै कारण बालविवाह सबैका लागि चुनौती बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
बालविवाह रोक्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिएको भएपनि आवश्यक श्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले यो प्रमुख समस्या बन्दै आएको उनले बताए ।
त्यसैगरी सिर्जनाकला माविमा अध्ययनरत प्रति भावलीले बनाईएका नीति नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा बालबालिकाहरू बालविवाह गर्न पुग्ने गरेको बताइन् ।
‘विवाह हुन दिनु बालविवाह गर्दै हुन्छन्, नहु नदिनु छोरीको जिम्मा तैँले लिनुपर्छ भनेर उल्टै जवाफ दिन्छन्’ उनले भनिन्– ‘जब परिवारले नै पुनस्र्थापना नगर्ने भएपछि उनीहरू जाने कहाँ, हामीले उनीहरूको जिम्मा कसरी लिने ?’
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनहरू बनाउँदैमा न्यूनीकरण हुन नसक्ने उनले बताईन् । यसका लागि हरेक परिवारमा छोरीप्रतिको साेंच सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय छोरीहरूका कापी, कलम, विद्यालय पोशाकहरू परिवारबाट उपलव्ध नहुँदा पनि पढ्दा पढ्दै भागेर विहे गर्ने गरेको पाइन्छ, उनले भनिन्– ‘यसको जिम्मेवारीको अभिभावक होइनन् ? ’
आफ्ना सन्तानलाई २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न दिनु हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अभिभावहरू सन्तानको उमेर लुकाई, उनीहरूलाई लुकाई विवाह गराईदिने गरेको लक्ष्मी बुढाको भनाई छ ।
‘हामीले थाहा पाएसम्म रोक्ने गरेका छौँ’ उनले भनिन्–‘तर यसका लागि समाज पनि सकारात्मक भएर हामीलाई साथ दिनुपर्ने हो नि ! तर यहाँभोज खाने लोभमा उल्टै हामीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न खोज्छन् ।’
कम उमेरमै विवाह गर्नु र गराउनु सामाजिक अपराध भएपनि अभिभावकले यस विषयमा ध्यान दिन नसक्दा यसको रोकथाममा चुनौती रहेको उनीहरूको भनाई छ । यसको लागि हरेक स्थानीयतहले अभिभावकविहीन,
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको पहिचान गरी बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि ध्यान दिन जरूरी रहेको औँल्याए । समाजमा छोराछोरीका आवश्यकता, ईच्छा, चाहनाहरू बुझ्न जरूरी रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
विशेषगरी अभिभावक र समाजका लागि असल संस्कारको विकास गर्न नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या हुँदै आएको छ ।